Rukuttaan Al Shabaab Keenyaa keessatti lubuu nama 28 galaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Rukuttaan Al Shabaab Keenyaa keessatti lubuu nama 28 galaafate
Rukuttaan Al Shabaab Keenyaa keessatti lubuu nama 28 galaafate
Hidhattooni garee Al Shabaab konkolataa ummataa kaaba Keenyaatti iggituudhaan lubbuu nama 28 galaafate. Hundi namoota harka Al Shabaabitti lubbuu isaanii dhabanii namoota amantaa Islaamaa hinhordofne ta’uun isaanii hubatameera. Al Shabaab namoota konkolaataa keessa turan akka amantaa isaaniitti erga gargar cokee booda tankaarfii ajjeechaa kana raawwachuu isaa angawaan poolisii Keenyaa tokko dubbateera.
Akka ibsa poolisiitti konkolaataan rukuttaan irratti raawwate kuni namoota 60 fe’ee gara magaalaa Naayroobiitti imalaa ture. Kuni kan ta’e lafa km60 magaalaa Mandheeraa irraa fagaattee argamtutti. Magaalaan Mandheeraa daangaa Keenyaa fi Somaalee irratti argamti. Namoota rukuttaa kanaan lubbuu dhaban keessa angawoonni naannoo sanii akk argaman beekameera.
Keenyaan yeroo addaddaatti Al Shabaabiin rukuttaan gosa adda addaa, boombii fi qawween, irratti raawwataa tureera. Al Shabaab Keenyaa irratti kan qiyyeeffateef, Keenyaan woraana isii gara Somaaleetti waan ergiteef ta’uu dubbata. Bara 2011 as Al Shabaab rukuttaa 135 Keenyaa irratti raawwatuu isaa Keenyaan dubbatti. Al Shabaab tankaarfii bara 2013 dukkaana ‘West Geet’ irratti, nama 67 lubbuu itti dhabe, kan raawwate isa ta’uu ibsee ture. Ajjeechaa gara jalqaba woggaa kanaa Keenyaa naannoo qarqara galaana Hindii irratti rawaatameefis, nama 90 du’e, itti gaafatamummaa fudhatee ture, Al Shabaab.
Humni woraana Gamtaa Aafrikaa garee Al Shabaab naannoo fi magaalota Somaalee heddu keessaa akka bahan dirqanii jiru. Humni Gamtaa Aafrikaa, ta’us garuu, rukuttaa Al Shabaab Somaalee keessatti raawwatu dhaabsisuu hindandeenne.
Hoogganaa garee Al Shabaab kan ture, Ahmad Abdii Godaanee, baatii Fulbaanaa keessa rukuttaa xayyaara Ameerikaatiin ajjeefamuun isaa niyaadatama. Du’a Ahmad Godaanee booda, Ahmed Umar hoogganaa Al Shabaab ta’ee muudamuu isaa niyaadatama.
Previous articleAmmas Perezidaantiin biyya Aafrikaa biroo du’uun isaa hinoolu jedha TB Joshuwaan
Next articleManchastar lamaan, Cheelsiifi Baayer Muniik injifatan. Arsenaal qabxii gate